Yakaderera Vhoriyamu Kugadzira | Yakaderera Vhoriyamu kugadzirwa - Gadziraproto - Gadziraproto Tech Co, Ltd.
KUDZIDZA / Yakaderera-Vhoriyamu Kugadzira
Ipfupi-inomhanya uye yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa kunogona kuwanikwa nenzira dzakasiyana dzekugadzira. Izvo zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti iwe unozofamba kubva kum prototype kuenda mukugadzira mushe.
Createproto ndeye yakaderera-vhoriyamu inogadzira iyo inoshanda isinga pfuurirwe mwero wehunyanzvi kuendesa mhando uye kudzokorora pane yega yega chikamu. Isu tinoona nzira yako yakanakisa kuenda kumusika zvichienderana nezvinangwa zveprojekiti yako uye zvaunotarisira, zvichipa mutengo unodhura uye wakagadziriswa mazano kubva kumagadzirirwo, zvigadzirwa, maitiro ekugadzira, kugadzirwa, nezvimwe.
Inoshanda uye Inoshanda Yakaderera-Vhoriyamu Kugadzira
Yakasarudzika Yakadzika-Vhoriyamu Kugadzira Ndiyo Iyo nzira YeRamangwana
Nhasi, kune zvakawanda zvinotarisirwa zvekugadzirisa uye kusiyanisa kubva kune vatengi kupfuura nakare kose. Sezvo chako chigadzirwa lifecycle ichiderera uye nyowani chigadzirwa kuvhura kutenderera kutapudza, inoshanduka hunyanzvi uye nguva-kune-musika yakakosha kune yako zano. Yakasimudzirwa neiyi, chigadzirwa dhizaini chinokura nekukurumidza uye vagadziri vechigadzirwa vanodzora kutarisisa kwavo kubva mukugadzira kwakawanda kuenda kune yakaderera-vhoriyamu yekugadzira.
Zvichienderana nemaitiro ekugadzirisa, maitiro ekugadzira, kudhirowa dhizaini uye zvishandiso zviri kushandiswa, yakaderera-vhoriyamu yekugadzira kazhinji inosanganisira kugadzirwa kwemazana zana kusvika 100K zvikamu. Zvichienzaniswa nenjodzi zhinji nemitengo inosanganisirwa nekukwirisa nekuchimbidza nekukurumidza "kushambadzira kwakawanda", tsika yekugadzira yakaderera-vhoriyamu inoderedza njodzi, inoita dhizaini kuchinjika, inoderedza nguva-kumusika, uye inogadzira mikana yekuchengetedza mutengo wekugadzira. Iyo inoshanda pfupi-inomhanya-kana yakaderera-vhoriyamu yekugadzira mhinduro inoita kuti vese vanobatika vabatsirwe mune yechigadzirwa lifecycle, kubva dhizaini kugadzira uye nzira yese kuenda kune yekupa cheni nevatengi. Bata maneja weprojekiti yedu nhasi kuti utange chirongwa chako nemahara.
Kubatsira kweKuchidzika-Vhoriyamu Kugadzira
● Dhizaini iterations inochinjika
Kugadzira yakaderera-vhoriyamu chigadzirwa anomhanya zvinoita kuti zvive nyore kusimbisa dhizaini, mainjiniya, uye kugadzirwa usati waisa mari mune anodhura ekugadzira maturusi uye uchiaisa mukuwandisa kugadzirwa. Inokurumidza dhizaini iterations mushure mekutanga mutyairi wekumhanya inogona kuwedzera kukwidziridza uye kugadzirisa icho chigadzirwa usati watarisana nevamwe vatengi.
● Kupfupikisa kushandurwa asi mutengo wakaderera
Sezvo mutengo wekushandisa nekumisikidza unova wakanyanya kukosha zvikamu zvebhajeti yeprojekti, yakaderera-vhoriyamu yekugadzira maitiro inowanzo kuve inodhura-kupfuura iyo inogadzirwa nemass nekuda kwekukurumidza mukuvaka uye ipfupi kutenderera nguva, nekudaro inoderedza mutengo wese wekugadzira .
Uye zvakare, zvivakwa zvehuwandu hwekugadzira zvinowanzo gadza mashoma odha zvinodiwa kuti vadzime yavo inorema yekudyara mari uye kufukidza kumisikidza mitengo. Nekudaro, vashoma-vhoriyamu vagadziri vanokubatsira iwe nekukurumidza uye nekuchinjika kurongeka. Izvo zvinonyanya kubatsira kune ekutanga nhanho uye madiki kusvika epakati-saizi makambani.
● Bhara mukaha mukugadzirwa
Kuburitsa mazana kuzviuru zvisati zvaitika zvigadzirwa zvekugadzira inogona kuve nhanho inobatsira zvikuru usati waenda mukugadzira kwakawanda. Mutyairi wendege achakwanisa kubvarura musiyano uripo pakati pekuenzanisira uye kugadzirwa, kuwana mashandiro ako, fomu bvunzo dzakaringana uye yeinjiniya dhizaini yekuongorora yaitwa nekukurumidza, inokutendera kuti uratidze vangangoita vatengi nevatengesi chigadzirwa chaicho chakapedzwa, uye rega chero nyaya dziwanikwe uye yakagadziriswa zvakanaka pamberi pavo ichiendeswa mukugadzirwa.
● Nguva pfupi yekutengesa
Nemakwikwi ari kuramba achityisa mumusika wechigadzirwa, kuve kambani yekutanga ine zvigadzirwa zvakasarudzika kusimudzira musika kunogona kuita mutsauko pakati pekubudirira nekutadza. Iko kusanganiswa kwemakwi ane makwikwi uye asingafungidzike kwakatungamira vanogadzira uye mainjiniya ekugadzirisa kutarisana nekumanikidza kwekumisikidza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro panguva shoma yenguva inogoneka. Sezvo kugadzirwa uye kutsigirwa kwecheni rutsigiro kwakagadziridzwa kune yakaderera-vhoriyamu chigadzirwa, kugadzira kunogona kuona kugona kweprojekti, uye kuita kuti chigadzirwa chako chiende kumusika nekukurumidza pamutengo unodhura.
Zvikumbiro zveLow-Vhoriyamu Kugadzira
Anoshanda prototypes anoenderana ekupedzisira zvigadzirwa
Kugadzira-giredhi mainjiniya prototypes
Inokurumidza zambuko tooling kana zambuko kugadzirwa
Pre-yekugadzira zvikamu zvekuongorora bvunzo (EVT, DVT, PVT)
Tsika yakaderera-vhoriyamu CNC yakashongedzwa zvikamu
Plastic jekiseni kuumbwa zvikamu zvemutyairi anomhanya
Yakadzika-vhoriyamu jira simbi nhema
Yakakwira-mhando zvigadzirwa zvakagadzirwa
Ipfupi kumhanya kwezvigadzirwa zvikamu
Rega ItaProto Bata Zvese Zvako Zvakaderera-Vhoriyamu Zvekugadzira Zvinodiwa
Tsika Yakaderera-Vhoriyamu CNC Mashini
Mune yakasarudzika chikamu cheakaderera vhoriyamu yekugadzira, CNC machining inoita basa rakakosha mukugadzira tsika yezvigadzirwa zvemuchina zvikamu zvepurasitiki nesimbi. Kugadzira mumavhoriyamu akaderera muCNC michina zvakare imwe yakanaka yekugadzirisa mhinduro kune iri kuuya yakawanda yekugadzira purogiramu.
Seunyanzvi hwekugadzira muCCC machine, CreateProto yakashandira vatengi kubva kumaindasitiri akasiyana siyana nekugadzira mhando yepamusoro, chaiyo machining zvikamu uye zvikamu zvakaoma. Iko kusanganiswa kwemidziyo yepamusoro uye ruzivo rwusingapfuurike uye ruzivo rwevamiriri vedu vechikwata zvinotipa mukana wakakura wepfupi yekumhanyisa zvigadzirwa uye nekubatsira vatengi kuona dhizaini kuchinjika kuburikidza nekumhanyisa michina maitiro.
Isu tinopa imwe-yekumira shopu kune ako ese epasi-vhoriyamu machining mapurojekiti muChina. Kunyangwe iwe uchida epurasitiki-giredhi mapurasitiki, simbi dzakasiyana siyana, kana yakasarudzika aruminiyamu michina yezvikamu, GadziraProto inokwanisa kubata chero musanganiswa wezvinhu uye mavhoriyamu ako.
Mari-Inobudirira Inokurumidza Jekiseni Kuumbwa
Rapid jekiseni Kuumbwa inopa sarudzo iri nani kune avo vatengi vanoda yakaderera vhoriyamu rakaumbwa zvikamu. Izvo hazvigone chete kugadzira mazana ekugadzira-giredhi epurasitiki zvikamu zvekuongorora bvunzo padyo nechokupedzisira chigadzirwa, asi zvakare zvinopa pane-kudiwa kugadzirwa kwemagumo-ekushandisa zvikamu zveakaderera-vhoriyamu yekugadzira.
PaPeopleProto, isu tinogadzira nekukurumidza kukurumidza kweese aruminiyamu nesimbi uye yakaderera-vhoriyamu kuumbwa kwepurasitiki, uye tinomhanyisa zvikamu kwauri pane chirongwa chinotsigira kuyedza kwako kwese uye pre-yekugadzira purogiramu. Isu tinobatanidza echinyakare jekiseni muforoma tooling nzira nekukurumidza chakuvhuvhu tooling kupa mutengo-unoshanda uye zvine hungwaru mazano kubva kumagadzirirwo, zvigadzirwa, zvigadzirwa zvekugadzira, kugadzirwa, nezvimwe.
Panguva imwecheteyo, kana dhizaini ichigadzikana kana mavhoriyamu ari kukura, GadziraProto ichaenda kune yakajairika kugadzirwa kweforoma kuti ubatsirwe. Mhinduro dzakasiyana-siyana dzetsika mapurasitiki zvinoreva kuti unoshanda nechero sosi yezvinhu zvese kubva prototype kusvika kugadzirwa kwekuendesa.
Yakasarudzika Sheet Simbi Kugadzirwa
Sheet simbi yekugadzira ndiyo nzira yekuumba zvikamu kubva pane simbi sheet nekucheka, kubaya, kutsika, kukotama, uye kupedzisa. Zvichienzaniswa nemutengo wepamusoro wekumisikidza uye kutenderera nguva yekukwirisa vhoriyamu, yakaderera vhoriyamu simbi yekugadzira inoderedza nguva yekumisikidza kuitira kuti mabasa akurumidze kuchinjwa pamusoro.
GadziraProto tsika jira simbi masevhisi anopa anodhura-anoshanda uye pane-kudiwa mhinduro kune ako ekugadzira zvaunoda. Kubva pane imwe prototypes kune yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa, isu tinopa dzakasiyana siyana nzira dzekugadzira, zvinhu zvivakwa, uye ekupedzisa sarudzo. Kugona kwedu kunosanganisira kugadzira zvikamu kubva pasimbi isina chinhu, aruminiyamu, simbi, ndarira, mhangura, kwakakurudzira nezvimwe, uye kugadzira mapaneru emidziyo, mafuremu, makesi, chassis, mabhureki, nezvimwe zvinhu zvinopinda mumusangano mukuru.
Isu tinodada nekugara tichivandudza ruzivo rwevatengi neyakagadziridzwa tekinoroji uye rutsigiro, uye tinoshanda pamwe nevatengi vedu kuti tipe yakakwira nhanho yepamusoro-vhoriyamu yekugadzira sevhisi.
3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Kurumidza Prototyping, Kukurumidza Prototyping, Cnc Rapid Prototyping, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Kuchengetedza,